नवलपरासीमा बोल्दै गरेको माइक छोडेर यसरी भागे महन्थ ठाकुर ! प्रहरी तीनछक्क !
ARCHIVE, POLITICS » नवलपरासीमा बोल्दै गरेको माइक छोडेर यसरी भागे महन्थ ठाकुर ! प्रहरी तीनछक्क !
नवलपरासी । -नवलपरासीको परासीस्थीत बुद्धचोकमा भाषण गरिरहेका राष्ट्रीय राष्ट्रीय जनता पार्टी (राजपा)का संयोजक महन्थ ठाकुर एकाएक कुलेलम ठोकेपछि प्रहरी तिनछक्क पर्यो । आइतबार राजपाले आयोजना गरेको विरोध सभामा प्रहरी र कार्यकर्ताबीच झडप हुँदा ठाकुर बोल्दै गरेको माक छोडेर भागेका हुन् ।